Kullan Nairobi ku dhaxmaray Musharax Yusuf Xassan iyo wariyaal Somali ah..
Galanimadii sabtida aheed ee taarikhdu ku aadaneed 10-Nov-07, Yusuf Xasan oo ah musharaxa u taagan xilka dhildhibaanimada Degmada Islii ee ay somalidu ku badantahay gaar ahaan isaga oo ka socda xisbiga ODM.
Kullanka oo asaa intiisa badan mid is barasho ah waxa ka soo qeebgalay wariyaal kala kala socday dhamaan Kheebaha kala duwan ee warbaahinta Somalia, sidoo kale waxaa ka soo qeebgalay madax ka socotay ururka warfidiyeenka somaliyeed ee dalka Kenya ee marka la soo gaabiyo loo qayaano " SOMJAK". Waxaana joogay gudomiyaha iyo afhayeenka "somjak".
Musharaxa Yusuf Xasan oo markii hore bahda saxaafada aan ka marneen inta uusan ku soo biirin siyaasada dalka Kenya ayaa waxa uu wariyaasha halkaasi ku soo xaadiray u u soo jeediyay Qudbad fiican oo wariyaashi ka soo qeebgalay ay si fiican ooga wada maqsuudeen.
Macluumaad kala duwan ayay is weedaasadeen wariyaasha iyo Yusuf Xassan, wariyaasha into badana waxa ay muujiyeen sida ay diyaar u yihiin in ay garab is taagi doonaan musharax Yusuf Xassan, sidoo kale isla Yusuf waxa uu sameeyay balan qaadyo fara badan dib ayaana loo balamay in kulllamo danbe ay yeelan doonan bahda saxaafada iyo Yusuf xassan iydoo dalka Kenya ay ku soo qaxeen wariyaal fara badan..
Musharrax Yusuf Xassan
Dalka Kenya waxaa uu ku jiraa xilli adaga oo doorasho, dhamaana dadka waxa ay isha ku hayaan cida ay guusha raaci doonto saxdaxda xisbi ee tartanka doorashada dalka Kenya ku loolamaya ee kala ah ODK, ODK-K iyo PNU. Ciddii ay guusha raacdana waa la arki doonaa.
Musharax Yusuf Xassan iyo ibraahim da'ud "Gentleman"
ibraahim da'ud "Gentleman"
Musharixii ugu horeeyey xilka Ra'iisul Wasaarenimada DFKMG oo noqdey Prof. Buubaa
Xilka ra'iisul wasaaraha ma leh beel keliya ayuu yiri, waxana uu u ololaynayaa soo celinta Somaliland
DHEGEYSO waraysiga Buubaa